Oct 20, 2021 05:59 PM Merolagani
अध्याय ७ः मैले पाएँ, मैले पाएँ– यो के हो?
जुन तपाईले अघिल्ला अध्यायहरुमा पाउनु भयो त्यो कथाको एक टुक्रा मात्र हो जसलाई विकसित गर्न बाँकी छ।
‘अनुसन्धान बिना लगानी गर्नु स्टड पोकर खेल्नु तर कहिले तास नहेर्नु जस्तो हो।’
‘तपाई गर्नु पर्ने भनेको आफुले किराना सामान किन्दा जति मेहेनत गर्नुहुन्छ त्यति नै मेहेनत स्टक खरिद गर्दा लगाउनुपर्छ।’
बटम लाइन के हो?
यदि तपाई कुनै एक कम्पनीको प्रडक्टको वृद्धि हुन्छ भन्ने लाग्छ भने प्रश्न यो हुन्छ कि त्यस प्रडक्टले कति प्रतिशत आम्दानी गर्नेछ?। प्रोक्टर र ग्याम्बल जस्ता कम्पनीहरुका लागि प्याम्पर छिटो वृद्धि हुने प्रडक्ट हुनसक्छ तर अन्त्यमा कम्पनीलाई त्यसबाट पर्ने प्रभाव झिनो हुनसक्छ।
ठूला कम्पनी, साना कदम
कम्पनी जति ठूलो हुन्छ, त्यति नै उसको वृद्धिदर स्थिर राख्न अथवा बढाएर लान गाह्रो हुन्छ।
‘तपाईले साना कम्पनीहरुले ठूला कदम चालेको देख्नसक्नुहुन्छ। तपाई दुई वर्षमा आफ्नो पैसा चार गुणा हुन्छ भन्ने सोचेर कोका कोला जस्ता ठूला कम्पनीहरुको स्टक खरिद गर्नुहुन्न।’